सुसाइड नोटमा ‘ससुरालीका सबै मिलेर कुटेको’ लेखेर आत्महत्या ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सुसाइड नोटमा ‘ससुरालीका सबै मिलेर कुटेको’ लेखेर आत्महत्या !
प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामदेखि केही दुरीमा मात्र रहेको धनुषाको नक्टाझिझका एक युवकको रहस्यमीय मृत्यू भएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर २ बस्ने स्थानीय पुलकित महतो (मृत्यू भईसकेको) को २६ बर्षिय छोरा रामचन्द्र महतो आफ्नै ससुरालीमा मृत भेटेका छन् ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ५ श्रीपुर बस्ने विशेश्वर महतो (बिशे) की घर (ससुराली) गएका महतो आज बिहानै मृत अवस्थामा भेटिएको हो । महतोले आत्महत्या गरेको पनि बताईएको छ ।
करिब ४ बर्ष अगाडी बिशे महतोकी छोरीसँग लभ म्यारेज (प्रेम विवाह) गरेका महतो सोमबार साँझ ससुराली गएका थिए । उनको ससुराली पक्षबाट झगडा परेपछि आत्महत्या गरेको ससुराली पक्षको कथन छ ।
४ बर्ष अगाडी बिशेकी छोरी अमृत कुमारी महतोसँग रामचन्द्र महतोले प्रेम विवाह गरेका थिए । उनी दुवै जनाको घरमा पनि बराबर समान्य झगडाहरु हुँदै आएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
महतो आज बिहान झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको भनेर ससुराली पक्षले दाबी गरेको छ । यता, प्रहरीले भने उनलाई झुण्डिएको अवस्थामा भने फेला नपारेको तथा मृत अवस्थामा फेला परेको बताएको छ ।
सो ठाउँका छिमेकीहरुले समेत केही बोल्न मानेका छैनन् । महतोकी श्रीमति अमृत कुमारीले समेत उनी आफ्नो सल (दुपट्टा) मा पासो लगाएर झुण्डिएको बताइरहेकी छन् । यद्यपी, प्रहरीले जानुभन्दा अघि नै उनीहरुले सललाई काटेर तल झारेको दाबी पनि गरिरहेको छ ।
ससुराली पक्षले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको भनेपनि प्रहरीले मृत्यू शँकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरी बोलाउनु अघि नै ससुराली पक्षले झुण्डिएकोबाट तल आरालेको दाबी गरिरहेका छन् ।
यता, मृतक महतोको गोजीमा एक चिठ्ठी समेत फेला परेको छ । सो चिठ्ठीमा महतो ससुराली जाँदा कुटपिट गरी बे इज्जत गरेको भन्दै आत्महत्या गर्न बाध्य भएको लेखेका छन् । उनको गोजीमा फेला परेको चिठ्ठीमा आत्महत्याको कारण ससुराली पक्ष नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ससुराली पक्षमा सबै जना मिलेर कुटपिट गरेको र असहय गालीहरु गरेको भन्दै आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । तल दुईवटा हस्ताक्षर समेत गरिएको छ । नेपालीमा रामचन्द्र र अँग्रेजीमा राम बिन्दास भनेर देखिएको छ ।
पोष्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पतालमा लैजादाँ उनको गोजीबाट सो चिठ्ठी फेला परेको सँचारकर्मी बिनोद महतोले जानकारी दिए । यद्यपी, सो चिठ्ठीमा उनकै अक्षर रहेको वा नरहेको भन्ने बारे प्रष्ट छैनन् ।
सो चिठ्ठी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगिएको बताइएको छ । मृत्यू शँकास्पद देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । महतोलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गर्न उनको सासुले टर्चर गरेको परिवारजनको आरोप छ ।
मृतक महतो र अमृताको दुई छोरा छन् । एक ३ बर्षका र अर्का १ बर्षका छोरा छन् । उनीहरु लभ म्यारेज गरेपछि ससुराली पक्ष असन्तृष्ट रहँदै आएको बुझिएको छ ।